မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Yantai Haicheng Sanitary Products Co. , Ltd.
Q1: မင်းကုမ္ပဏီကစက်ရုံတစ်ရုံလား။ ဘယ်လိုပိုးသတ်ဆေးထုတ်လုပ်သလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ပိုးသတ်ဆေးပြုပြင်ထုတ်လုပ်သောအရောင်းအမျိုးအစားများမှာ - ၇၅% အရက်သေစာပိုးသတ်ဆေး၊ လက်သန့်စင်ဆေးဂျယ်လ်၊ လက်ဘက်ရည်ပိုးသတ်ဆေးဆပ်ပြာ၊ အဝတ်လျှော်ဆေးသန့်စင်ဆေး၊ ပါးစပ်ဆေး၊ ကလေးပုလင်းသန့်ရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်၊ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစားအစာသန့်ရှင်းရေးပိုးသတ်ဆေး၊ အစားအစာထိန်းသိမ်းခြင်း၊ hypochloric အက်ဆစ်ပိုးသတ်ဆေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုးသတ်ဆေး, Formaldehyde scavenger, စက်ရုံကြီးထွားမှုအာဟာရဖြေရှင်းချက်, ရေအရည်အသွေးပြုပြင်မွမ်းမံ, သံချေးဖယ်ရှားပေး, နှောင့်နှေးမှုန်ရေမွှား, beriberi ရေ, မီးခိုးရောင်လက်သည်းရေ, ပူဖောင်းရေချိုးအရည်, ဆံပင် tonic မှုန်ရေမွှား, သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းအရည်, မိုးသည်းထန်စွာရေနံဆပ်ပြာ, အနုတ်လက္ခဏာအိုင်း ရေ, etc
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၇၅% အရက်စိုစွတ်သောသုတ်ဆေးများ၊ အရက် wipe များ၊ အရက် pad၊ sterilizing sanitary wips, Baby wips, မီးဖိုချောင်သုံး wipes, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် wipe များ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း wipe များ၊ မျက်မှန်သုတ်များ၊ အိတ် ၁ ခု၊ အိတ် ၁၀ အိတ်၊ အိတ် ၂၀ အိတ်၊ အိတ် ၃၀၊ အိတ် ၄၀၊ အိတ် ၅၀၊ အိတ် ၆၀၊ အိတ် ၈၀၊ အိတ် ၁၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ စည် ၆၀၊ , 160 စည်, 800 စည်, 1200 စည်, လည်းဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီထုတ်လုပ်မှုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုအ ၀ တ်အထည်၊ တစ်ခါသုံးဆေးစစ်ခြင်းလက်အိတ်များ၊ တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်လက်အိတ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖုံးများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထီးကျန်ကာမျက်မှန်များ မျက်နှာဖုံးများ၊ အကာအကွယ်ဖိနပ်အဖုံးများ၊
Q4: အရက်သေစာပိုးသတ်ဆေးနှင့်ဆေးကြောသန့်စင်မှုမရှိသည့်ဂျယ်လ်၏အရက်ပါဝင်မှု။ အရက်ကိုသုံးခဲ့သလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရက်ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ဆေးကြောသန့်စင်မှုမရှိသည့်ဂျယ်လ်တင်ပို့မှုအများစုသည် ၇၅% အရက် (အီသနော) ဖြစ်ပြီးဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအရပိုးထည်ပိုမိုများပြားသောဒြပ်ပေါင်းများအဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအရက်သည် ၇၅% အစားအစာတန်းဖြစ်သည်။
Q5: လက်သည်းဆပ်ပြာရည်သည်မည်သည့်အရောင်ရှိသနည်း။ သင်ရေမြှုပ်လုပ်နိုင်မလား?
အရောင်သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရဖြစ်သည်။ အထွေထွေဖောက်သည်များသည်ပွင့်လင်းသောအရည်ကိုလိုချင်ကြသည်၊ အပြာ၊ ပန်းရောင်၊ အစိမ်း၊ အဝါရောင်နှင့်အခြားပွင့်လင်းသောအရည်အဖြစ်လည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ antibacterial လက်ဆပ်ပြာကိုအမြှုပ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
Q6: အဝတ်လျှော်သန့်ရှင်းဆေးသည်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်သလား။ စျေးနှုန်းကအားသာချက်ရှိလား။
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းမှာ p-chloro-xylene phenol ဖြစ်သည်။ DETTOL ဖော်မြူလာနှင့်အတူတူဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းချိုသာသည်။
Q7: ပါးစပ်ဆေးကြောခြင်း၊ ကလေးပုလင်းသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်း၊ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစားအစာသန့်ရှင်းရေးပိုးသတ်ဆေး၊ အစားအစာထိန်းသိမ်းခြင်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယားယံစေပါသလား။
အဓိကအစိတ်အပိုင်းသည်သဘာဝ anion ရေဖြစ်ပြီးစင်ကြယ်သောရေမှမြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှု anion သို့ electrolyzed ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်ခိုင်ခံ့သော osmotic သန့်ရှင်းရေးစွမ်းရည်နှင့်ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများရှိပြီးလူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုမထိခိုက်စေနိုင်သည့်အပြင်မညီမညာဖြစ်နေသည်။
Q9: စိုစွတ်သောသုတ်၏ဖွဲ့စည်းမှုကဘာလဲ သင်တို့ရှိသမျှသည်အဘယ်သို့သော function ကိုနှင့်စိုစွတ်သောသုတ်ထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးနိုင်သလဲ
စိုစွတ်သောသုတ်များသည်အရည်များပါ ၀ င်သည့်အစိုင်အခဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရခိုင်မာသောဇီဝဓါတုဗေဒဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ရှိသည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းသည်အိတ်များ၊ စည်များ၊ သေတ္တာများသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရအမျိုးမျိုးဖြစ်စေနိုင်သည်။
Q10: သင်လိုင်စင်ရဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်း? အနည်းဆုံးအမှာစာရှိပါသလား။
ဟုတ်တယ်၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးတယ်။ အနည်းဆုံးအမှာမှာ 20 GP ကွန်တိန်နာဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုနိုင်ငံများစွာ၌ကောင်းစွာရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ FDA CE MSDS နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလက်မှတ်များသည်အလွန်ပြည့်စုံသောကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးအတွက်စိတ်မပူပါနှင့်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးမန်နေဂျာနှင့်ဆွေးနွေးပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ပေးသွင်းသူအားလုံးကသေးငယ်ပြီးကြီးမားသည်။ နှစ်ဖက်အကြားကုန်သွယ်မှုသည်ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုအမိန့်အနည်းငယ် မှနေ၍ လက်လီရောင်းဝယ်သူများစွာအထိဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အတူတကွကြီးထွားရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပေးသွင်းသူများနှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ရန်ဆန္ဒရှိသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုစိတ်မပူပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးကွဲတစ်ခုစီသည်တစ်နေ့လျှင်ပုလင်း ၁၀၀၀၀၀ ကျော် (အိတ်များ) ထုတ်လုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းကိုပမာဏများစွာပေးနိုင်ပါသည်။
ဒါကသင့်မှာကြားမှုပမာဏပေါ်မူတည်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အတွက်စီးပွားရေးမန်နေဂျာနှင့် ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပါ။